Weerar Madaafiic ah oo lagu qaaday Saldhig ku yaal Jubbada Hoose | Wardeeq 24 TV
Home Warar-ka Weerar Madaafiic ah oo lagu qaaday Saldhig ku yaal Jubbada Hoose
Weerar Madaafiic ah oo lagu qaaday Saldhig ku yaal Jubbada Hoose
Wararka naga soo gaaraya degaanka Hoosingow ee Gobolka Jubbada Hoose ayaa waxaa ay sheegayaan in Xubno ka tirsan Ururka Al-Shabaa ay weerar madaafiic ah iyo mid toos ah ku qaadeen Salshiga Ciidamada Kenya.
Dadka degaanka ayaa waxaa ay sheegeen in ilaa dhowr madfac lagu weeraray Saldhiga, sidoo kalena uu jiray dagaal toos ah oo dhexmaray Ciidamada Kenya iyo Xubnaha ka tirsan Al-Shabaab ee Saldhiga weeraray.
Wararka la helayo ayaa sheegaya in madaafiicda qaarkood ay ku dhaceen Gudaha Saldhiga iyo Xaafadaha qaar balse aan sirasmi ah loo oegyn qasaaraha ka dhashay maadaama Ciidamada Kenya aysan ogolryn in loo dhawaado Salshigooda.
Wararka ayaa waxaa ay intaasi ku darayaan in Ciidamada Kenya dhankooda ay madaafiic ugu jawaabeen Al-Shabaab, waxaana haatan degan xaalada degaanka hoosingow oo dhowr jeer ay weeraro ka dhaceen.
Previous articleMaxkamadda Sare ee Ciidamada Puntland oo Maanta xukun rideysa
Next articleSAWIRO:- Khasaaraha ka dhashay dab ka kacay Suuqa Boosaaso oo kordhay